Chii chinonzi RSS? Chii Chikafu? Chii Chiteshi? | Martech Zone
Nepo vanhu vachikwanisa kuona HTML, kuitira kuti mapuratifomu esoftware adye zvemukati, inofanirwa kunge iri mumhando inoverengwa. Iyo fomati ndiyo yakajairwa online iri RSS uye kana iwe ukashambadzira ako azvino matsamba mune ino fomati, inonzi yako chikafu. Uine chikuva senge WordPress, chikafu chako chinogadzirwa otomatiki uye haufanire kuita chinhu.
Fungidzira iwe uchibvisa zvese zvako zvesaiti zvigadzirwa uye wongopa zvemukati kune imwe saiti kana kunyorera. Ndo chaizvo zvakagadzirirwa RSS!
Vanhu vazhinji vanotenda izwi rekuti RSS rinomiririra Chaizvoizvo Simply Syndication asi zvakanyorwa zvekutanga Yakapfuma Saiti Pfupiso… Uye pakutanga RDF Saiti Pfupiso.
Chii chinonzi RSS?
RSS iri webhu-yakavakirwa gwaro (inowanzoidzwa inonzi chikafu or webhu feed) iyo inoburitswa kubva kune sosi - inonzi iyo mugero. Chikafu chinosanganisira yakazara kana yakapfupikiswa zvinyorwa, uye metadata, sekuburitsa zuva uye zita remunyori.
Iyi vhidhiyo ipfupi kubva kune vanhu vari paTechNewsDaily vachitsanangura mashandisiro avashandisi mukana weKunyatso Nyore Syndication (RSS):
Sei uchifanira kufarira?
RSS feeds inogona kushandiswa nemapuratifomu akadai seFeedly uko vashandisi vanonyorera kumatanho avanoshuvira kuverenga kazhinji. Muverengi wekudya anovazivisa kana paine zvinhu zvakagadziridzwa uye mushandisi anogona kuzviverenga asina kumboshanyira saiti! Zvakare, mafidha anogona kushandiswa kuburitsa zvirimo pane mamwe mawebhusaiti (isu tinoratidza zvinyorwa zvedu pa DK New Media nzvimbo uye Corporate Blogging Matipi), kana inogona kushandiswa kudyisa ako enhau midhiya chiteshi uchishandisa mapuratifomu senge FeedPress, Buffer, kana TwitterFeed.
Ah - uye usakanganwa ku Nyorera kune yedu RSS Kudya!
Tags: rdf saiti pfupisoyakapfuma saiti pfupisoRSSrss feedchii chinonzi rsschii chinonzi gwarachii chikafuchii chinonzi feed chiteshichii chinonzi rdf saiti pfupisochii chiri kupfuma saiti saitichii chinonzi web feedchii chinonzi rss chiteshichii chiri nyore kubatanachii chinonzi rss
Rondedzero Yakaparadzaniswa neWebhu Dhizaini Ongororo
Pane Chero Ari Kubvunza Ask.com?
Apr 25, 2007 pa 8: 14 PM
Ikoko, Doug. Chinhu chandainzwisisa chaizvo !! Ndine chokwadi chekugutsikana.
Apr 25, 2007 pa 8: 42 PM
Woohoo! Wanga uchishivirira kwazvo, Christine. Ini ndinowanzo wedzera hunyanzvi neangu maposita. Ndakafunga kuti yaive nguva yekudzora uye kubatsira vamwe vanhu kubata.
Kana iwe uri geek yakamisikidzwa mune izvi zvinhu, zvakaoma kurangarira havazi vese vamwe vanhu vanoziva zvauri kutaura nezvazvo!
Imwe yekupedzisira noti paRSS. Fungidzira uchibvisa pasi peji rino kungoita mazwi nemifananidzo iri muchinyorwa… nezvimwe zvese zvakasarudzika zvinhu zvabviswa. Ndozvinoita posvo senge mune RSS feed!
Ndinokurudzira Google Reader!
Apr 26, 2007 pa 4: 38 AM
Chimwe chezvinhu zveangu marefu ekuita-rondedzero yaive yekukumbira Douglas kuti anyore tsananguro diki yeiyo chaizvo RSS is.
Kutenda neicho pre-chisina chinhu steki, Doug. (uye kurudziro yechikamu chitsva mublog rangu, futi 😉)
Gumiguru 22, 2014 pa 11:16 AM
Iye zvino wave kushamisika kuti ndeyipi nyaya yemakomputa yauchayeuchidzwa nguva inotevera paunowana iwe zvakare kuverenga muBhuku raGenesisi lol.